ढाड दुख्ने समस्या देखि आजित हुनुहुन्छ ? ढाड दुख्ने समस्याको अचूक औषधि ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कपुर सेतो अथवा पारदर्शी ठोस पदार्थ रहेको हो। कपुर परापूर्वकाल देखि पूजा-आजा र आयुर्वेदिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको हो। खाद्यान्न भण्डारणको लागि पनि कपुर लामो समय देखि प्रयोग हुँदै आएको छ। खाद्यान्नमा घून, किरा, कमिला इत्यादी नलागोस् भन्नको लागि बट्टामा कपुर राखेर खाद्यान्नको भण्डारमा राख्ने चलन धेरै पूरानो हो।कपुरको धेरै औषधीय गुण रहेका छन्।
ढाड दुख्ने, दाँत दुख्ने, शरीरका खटिरा आदि-इत्यादी स्वास्थ्य समस्यालाई निको बनाउन कपुरको प्रयोग गर्न सकिन्छ।ढाड दुख्ने समस्या युवक देखि उमेर ढल्केका हरेकमा हुन सक्छ। ढाड दुखेको खण्डमा दुखाइ कम गर्न कपुरलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। ढाड दुखेको खण्डमा दुई पुरिया कपुरमा एउटा कागतीको रस मिसाएर मनतातो पारी दुखेको ठाँउमा लगाउन सकिन्छ।यी बाहेक कपुरलाई निम्न स्वास्थ्य समस्यामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कपुरको प्रयोग डाम रोगिहरुले पनि गर्न सक्छन् । एक भाग फुराएको हिङमा एक भाग कपुर मिसिएर केराउको दाना जत्रो गोली बनाउने र दुई\_दुई गोली तातो पानीसँग बिहान\_बेलुका सेवन गर्ने तथा तारपिनको तेल टातीमा लगाउनाले दम केहि महिनामै निको हुन सक्छ।
आउँ बाथ भएमा
पाँच भाग कपुर एक भाग गन्धक, मट्टितेलमा मिसाएर मलहम बनाउने र नियमित लगाउने गरे दाद आएका ठिक हुन्छ